Woxter Zielo 400 famerenana | Androidsis
Francisco Ruiz | | Fitaovana Android, hevitra, Android Version
Araka ny hitanao amin'ny horonan-tsary mifamatotra eo ambonin'ireto andalana ireto ihany, androany dia faly izahay mampiseho aminao ny hevitra lehibe natao momba ny Woxter Zielo 400, toy izany Quad Core Mediatek 6582 amin'ny 1,3 Ghz sy RAM 1 Gb azontsika atao amin'ny tranokalan'i Woxter manokana amin'ny vidiny tsy mahatratra 140 euro.
Ny tsara indrindra tsy misy fisalasalana momba ity terminal mampihetsi-po ity izay azontsika ampidirina ao anatin'ny elanelam-potoana Android, izay misy mandraka ankehitriny ny mpanjaka tsy voadinika Motorola Moto G 2014 Fanontana, dia toy ny nanamafisanay ny naman'i Woxter, ity terminal ity dia ho iray amin'ireo tafiditra ao amin'ny lisitry ny fanavaozana ofisialy ny Android 5.0 Lollipop.
1 Famaritana ara-teknika Woxter Zielo 400
2 Ny tsara indrindra amin'ny Woxter Zielo 400
3 Ny ratsy indrindra amin'ny Woxter Zielo 400
Famaritana ara-teknika Woxter Zielo 400
modely Zielo 400 na Z-400
Operating System Android 4.4.2 azo havaozina amin'ny Android Lollipop
efijery IPS 5 "miaraka amin'ny teknolojia OGS QHD
vahaolana 960 X 540
processeur MTK6582 Quad Core amin'ny 1 Ghz
Rom 8 Gb miaraka amin'ny fanohanana MicroSD
Fakan-tsary aoriana 8 mpx misy sensor CMOS sy FlasLED tafiditra ao
bateria 2000 mAh azo esorina
fepetra 145 x 72'8 x 7'9 mm
vidiny 139'99 Euro ny vidin'ny fandefasana
Ny tsara indrindra amin'ny Woxter Zielo 400
Tamin'ny andro nandinihako an'ity Woxter Zielo 400, ny tsara indrindra hitako nipetraka tao amin'ny rafitra fiasan'izy ireo madio tsy misy vovoka sy mololo, izany hoe, Android kinova 4.4.2 Kit Kat madio tanteraka tsy misy fanamoriana sosona, dia manararaotra an'ity terminal Android manaitra ity izay azontsika atao ambany kely amin'ny 140 euro.
Ny fampisehoana teknolojia anao 5 ″ IPS OGS mahatonga azy io ho fepetra tsara ho an'ireo mpampiasa izay tsy resy lahatra fotsiny amin'ireo fantsona lehibe kokoa izay lasa lamaody tato ho ato. Napetakao tamin'ny anao endrika kanto sy mahia, manana terminal eo alohanay manana mari-pahaizana kalitao / vidiny mendrika hotononina sy hatolotra izahay, ary ny fahalalana bebe kokoa aza ny drafitr'i Woxter izay hanavao izany tsy ho ela Android 5.0 Lollipop.
Ny tombony farany sy lehibe an'io Woxter Zielo 400, hitanay izany ao amin'ny fizarana an'ny Fiantohana ofisialy roa taona sy serivisy tsara aorian'ny fivarotana natolotry ny naman'i Woxter.
Ny ratsy indrindra amin'ny Woxter Zielo 400
Amin'ny lafiny ratsy amin'ny terminal dia azo antoka fa manasongadina ny fahatsiarovany fitahirizana anatiny isika, izay na dia 8 Gb aza, natokana ho antsika ihany. 2,9 Gb amin'ny fametrahana rindrambaiko sy lalao.
Ampahany ratsy iray hafa misy an'izy ireo, na dia mora aza ny vahaolana, dia hitantsika ao amin'ny Mpanafika mampihoron-koditra izay efa napetraka mialoha ao amin'ny ozinina, Android Launcher izay mamela zavatra be faniriana ary tsy manana safidy fanamboarana fototra toy ny mahay mandamina na manafoana ny efijery ao amin'ny biraontsika. Izy io dia tsy isalasalana fa ratsy kely kokoa satria isika dia afaka manolo azy amin'ny fomba tena mora amin'ny fampidinana sy fametrahana tsotra ny Android Launcher izay safidintsika amin'ny alàlan'ny fivarotana fampiharana Google.
Lafiny ratsy iray hafa manasongadina raha mpampiasa manome cane betsaka amin'ny terminal Android-nay isika, dia tsy isalasalana fa ny faritra bateria. ny batterie 2000 mAh fotsiny fa hanome toky ny sasany isika efijery efatra adiny efatra tsy tapaka, izay mitarika antsika amin'ny, mampiasa foana ny terminal amin'ny fomba antonony, hahatratra ny faran'ny andro fampidinana. Tsy misy isalasalana fa terminal iray izay tsy maintsy andoavantsika vola isan-kariva raha te havelany hidina amin'ny ampitson'iny isika.
Tsy misy isalasalana, ity Woxter Zielo 400 Izy io dia terminal iray handraisana kaonty ao anatin'ny faritra maro amin'ireo terminal Android tafiditra ao anatin'ny elanelam-potoana. Fantsona iray izay raha mihaona ireo fanavaozana nampanantenaina amin'ny Android 5.0 Lollipop ny tovolahy avy any Woxter, dia mety ho mpifaninana varotra lehibe ho an'i Motorola sy ny "tsitoha" Moto G 2014.
Araho hatrany Androidsis hatramin'ny zoma 27 febroary ho avy izao dia hanomboka ny Sarin'ny singa iray amin'ity Woxter Zielo 400 ity. Ny paositry ny antsapaka izay manan-kery ho an'ny saikinosy sy ny Nosy Balearic dia hatomboka ny zoma ho avy izao amin'ny 20:XNUMX alina ora Espaniôla. Fantatrao izao fa manaraha hatrany amin'ny Androidsis.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » [Lahatsary] Fanadihadiana Woxter Zielo 400 ny Quad Core an'ny Woxter izay hahazo fanavaozana amin'ny Lollipop
Victor lopz dia hoy izy:
Ny fijery tsara dia manana ny fitaovana woxter z4oo aho ary ao amin'ny horonan-tsarinao dia lazainao fa hamoaka ny kinova 5.0 izy ireo. Fantatrao ve hoe rahoviana izany?
Valiny tamin'i Victor Lopz
Gordillo dia hoy izy:
Tsara, mifandray aminao aho mba hilaza aminao ny fanavaozana ny maodely Woxter Zielo 400 amin'ilay fanavaozana Lollipop 5.0 izay tsy mbola tonga hatrizay ananako misy terminal toa izany ary tsy misy intsony. Raha ny fanavaozana ny. Amin'ny daty misy antsika amin'ny 14/03/2021 dia te hino aho fa azoko atao ny manavao azy amin'ilay kinova fanamarihana nataonao saingy tamin'ny zavatra novakiako teo dia nilaza izy ireo fa tsy mieritreritra hanome ireo olona ireo
tohano io fanavaozana io. Raha afaka manampy ahy amin'ny fanavaozana azy ianao dia tiako izany, misaotra.
Valiny tamin'i Gordillo
Ny Motorola Moto E 4G vaovao dia ofisialy. Lazainay anao ny masontsivana ara-teknika rehetra sy ny vidiny ofisialy